China i Series Non-invasive ventilator (COPD Therapy) orinasa sy mpanamboatra |Micomme
Manolotra safidy maro kokoa ny fomba fampitomboana ny taovam-pisefoana
Ny andiany Sepray I dia manana fomba amam-pisefoana maro：CPAP, S, T, ary S/T, VAT ary PC mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny marary.
Ny fomba S/T dia natao indrindra ho an'ny mararin'ny COPD sy II tsy fahombiazana amin'ny taovam-pisefoana, mba hitondra traikefa voajanahary sy malefaka kokoa.Ny maodely VAT dia ho an'ny marary COPD, aretin'ny hypoventilation matavy loatra ary ny habetsaky ny rano.Ny fomba PC dia ho an'ny marary manana taham-pisefoana haingana, ambany ny haavon'ny rano ary hypoxemia.
Ny elanelana fanerena dia 4-30cm H2O.Ny haavon'ny fanerena ambony dia mety hanome tosika fitsaboana mahomby sy maharitra ary
Output mikoriana mba hiarovana ny vokatry ny fitsaboana.
Algorithm siantifika vaovao hamantarana hetsika isan-karazany, manitsy ho azy ny tsindry.
Ny teknolojian'ny fanerena automatique dia afaka manara-maso sy mamantatra ny toe-javatra isan-karazany amin'ny taovam-pisefoana, valiny ara-potoana amin'ny rivotra ambany, ny apnea obstructive, ny famerana ny fikorianan'ny rivotra, ny snoring mitohy, sns., ary manafoana ireo soritr'aretina ireo.
Manaraka ny tsindry mandeha ho azy
6 karazana valin'ny tranga
Teknolojia azo antoka (VAT)
Tombanana ho azy ny fanerena ilaina hifanaraka amin'ny haben'ny kendrena araka ny fiovan'ny marary ary manome IPAP sy EPAP tsikelikely.
Blower matanjaka sy mahomby
Turbine avo lenta avy any ivelany miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 43000bpm isa-minitra, manome hery taovam-pisefoana mitohy miaraka amin'ny fanerena matanjaka kokoa, mahomby ary marina kokoa, ary manome onitra mahery vaika amin'ny fivoahan'ny rivotra.Famaliana haingana amin'ny haavon'ny fanerena, fampisehoana maharitra ary moana.
MODELY S1 T1 T2 T3 T5 P1
MODELY CPAP,S,S/T CPAP S,S/T CPAP,S,TS/T,VAT CPAP,S,S/T CPAP,S,T,S/T,VAT CPAP,S,T,S/T,VAT,PC
Fanerena isan-karazany 4-20cm H2O 4-25cm H2O 4-25cm H2O 4-30cm H2O 4-30cm H2O 4-30cm H2O
Fahamarinan'ny tsindry ± 0.2cm H2O
Max.Opération pressure 30cm H2O
Ora ramp 0 ka hatramin'ny 45 min（5 minitra fanampiny）
COMF fanalefahana ny tsindry 1-3 niveau
haavon'ny humidification Ambaratonga 1-5（113 hatramin'ny 185℉23 hatramin'ny 85 ℃）
Fotoana mitsangana Ambaratonga 1-6 (S,T,S/T)
Fahaizana fitahirizana data 8G USB kapila
lanja 1,72 kg
Midika haavon'ny feo ≤30dB
Vokatra mafana, Sitemap Ventilator tsy invasive, Ventilator Online, Fitaovana sy fitaovana hôpitaly, Ventilation tsy invasive amin'ny ankizy, Fitaovam-pitaterana tsy misy rivotra, Machine Manadio Cpap,